3 Imibono Yokwakha Isisekelo Sekwindla | Bezzia
3 Imibono yokwakha isikhungo sekwindla
UToñy Torres | | Zenzele
I-centerpiece ucezu olusemqoka ekuhlobiseni kwenye yefenisha ebaluleke kakhulu egumbini lokuphumula noma ekamelweni lokudlela, itafula eliyinhloko. Kungakhiwa ngezinto ezahlukahlukene zokuqhakambisa isikhathi sonyaka noma iholide eligujwayo. Futhi okujabulisa kakhulu nokujabulisa konke ukuthi ungabakha kalula ekhaya futhi ube nendawo ephambili yesimo ngasinye.
Ukwindla kulapha ngemibala yaso ebomvu futhi esawolintshi, namathanga ayo ne-ocher, namaqabunga ezihlahla agcwele ukuwa nakho konke leso sici sothando esivelele ngalesi sikhathi sonyaka. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokususa izakhi zasehlobo zendlu bese uzifaka ezinye esikhundleni sokwindla. Njengale mibono yaphakathi ekwindla esikushiyela yona ngezansi.
1 Ungayakha kanjani i-fall centerpiece
Ungayakha kanjani i-fall centerpiece
Imvelo igcwele izakhi zasekwindla ezilungele ukudala ingqophamlando eyingqayizivele neyangempela. Ngakho-ke unganqikazi hamba uhambo lwensimu ukukunikeza zonke izinto ezidingekayo ekudalweni kwakho. Qoqa izinto ezifana nezigaxa zikaphayini, amaqabunga awile ezihlahleni, ama-acorn nazo zonke izinhlobo zamantongomane ongazithola phansi ensimini.
Ukwakha indawo yokuqala ekwindla ukuhlobisa noma yiliphi igumbi, udinga kuphela ithileyi lokhuni, amanye amakhandlela amakhulu amhlophe, iziqukathi zengilazi lapho ungabeka khona amakhandlela, amaqabunga omisiwe namanye uphayinaphu namantongomane. Ngeribhoni ye-rustic, bopha iqabunga kukhandlela, ulibophe kahle ukuze linganyakazi futhi lingabi sengozini yokusha. Faka amakhandlela ngaphakathi kweziqukathi bese uqeda ukuwabeka kuthileyi kanye namantongomane nayo yonke eminye imihlobiso.
Ithanga liyinkanyezi yasekwindla, ngoba iyona ophambili wamaqembu e-Halloween futhi kuyo yonke inyanga ka-Okthoba baba yinto yokuhlobisa ngokwenza kahle. Yize kuyinto esabalele kakhulu ngaphesheya kwechibi, ibonwa kakhulu ezindlini zezwe lethu. Futhi kunengqondo ukuqonda ukuthi kungani, njengoba ithanga kunoma yiluphi usayizi, ubujamo nemibala yalo, liletha ukuthintwa okungokwemvelo nokwerustic kunoma iliphi ikhaya.
Bheka amathanga osayizi omncane futhi anemibala ehlukene, ezindaweni ezinkulu nakuma-greengrocers ungawathola ngaphandle kwenkinga enkulu kakhulu. Amathanga asevele engumhlobiso omuhle, ngakho-ke abadingi izithasiselo ezingeziwe. Ungabeka ithanga elincane etafuleni noma udale isikhungo esingasuswa lapho kunesidingo sokudla.
Ukuphela kokufanele ukwenze ukususa phezulu kwethanga, ungazisiza ngomsiki wensimbi oyindilinga noma ingilazi. Susa ngokucophelela wonke uginindela ngaphakathi, sebenzisa isipuni bese ususa kancane uginindela, kunzima impela kepha ngokubekezela ungakwenza. Zama ukungaliphuli ithanga ngoba lizoba maphakathi netafula. ukwindla okuhlaba umxhwele kunanoma iyiphi indawo.
Hlanza kahle ithanga ngaphakathi bese uliyeka lome ngokuphelele. Uzodinga i-vase ephansi nobubanzi obufanele ukuze ulingane ne-vase emgodini. Ngaphakathi kwesitsha kuzodingeka beka igwebu lengadi, ukuze ukwazi ukubethela izimbali uma ukhetha ezinye zokufakelwa. Uma kwenzeka ufuna ukusebenzisa izimbali ezintsha ngeke kudingeke ukusebenzisa igwebu eliluhlaza.
Ihlathi ligcwele uphayinaphu, ama-acorn nama-chestnut, kanye namanye amantongomane amaningi eziwa ezihlahleni ekwindla. Ukwakha ukuwa okumaphakathi okulula, okulula nokubamba amehlo, vele ubeke uphayinaphu namantongomane esitsheni esikhulu sengilazi. Ungasebenzisa futhi i-vase yengilazi ende futhi ebanzi noma noma yiliphi ithileyi lokhuni, ngoba ngokwalo lizokwengeza ukuthinta kwetafula lakho.
Uma ngaphezu kwalokho ungeza amaconsi ambalwa we-essence njenge-vanilla noma i-orange, uzoba nendawo ephambili yokuhlobisa kanye ne-air freshener yemvelo okufanele usebenzise ngayo amakha ekhaya lakho lokhu kuwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Zenzele » 3 Imibono yokwakha isikhungo sekwindla
Ukuzivocavoca okuhle kakhulu kokusebenzisa ama-glutes akho ekhaya